Wasiirka cusub ee amniga Puntland oo la dhaariyey (Dhageyso hadalo kala duwan) – SBC
Wasiirka cusub ee amniga Puntland oo la dhaariyey (Dhageyso hadalo kala duwan)
Wasiirka cusub ee amniga Puntland Jen. Khaliif Ciise Mudan ayaa maanta lagu dhaariyey xarunta madaxtooyada ee magaalada Garoowe ka dib markii xilkaasi loo magacaabay maalinimadii shaley.
Jeneral Khaliif Ciise ayaa ka dib markii la dhaariyey hadal uu jeediyey wuxuu ku balanqaaday in uu wax weyn ka qaban doono xaaladaha amaan ee ka jira Puntland, isagoo ka codsadey shacabka, Issimada, Hay’adaha & laamaha kale ee dawlada sidii xilka loo magacaabay uu u gudan lahaa.
Dhinaca kale Madaxweyne kuxigeenka Puntland Gen. Cabdi-Samad Cali Shire oo ka haldey xafladii lagu dhaarinayey wasiirka cusub ayaa sheegay in ay ku kalsoon yihiin in xilkan culus ee loo magacaabay Gen. Khaliif Ciise in uu ka soo dhalaali doono, waxaana uu sheegay in ay ku qabaan kalsooni arinkaasi.
Madaxweyne kuxigeenku wuxuu kaloo sheegay in wasiirkii hore ee xilkan horey u hayey aan la tuurin balse xil kale oo looga maarmi waayey loo dhiibay, taasi oo uu ku macneeyey in ay tahay in qofba maalin uu ku soo biiro maamulka.
Hadaba Link-ga audio-ha ka dhageyso khudbadihii la jeediyey wasiirka cusub & madaxweyne kuxigeenka.
SBC Internatoinal Garoowe